Ulawulo lomgangatho- iPandawill Technology Co, Ltd.
Sisebenzisa i-brand eyaziwayo yamanye amazwe ekrwada kwaye senza umgangatho wokuhlola ngokweMigangatho yeHlabathi kunye neemfuno zabathengi. Sigcina ukubekwa kweliso kubanikezeli bemisebenzi yokuphucula rhoqo kunye nokwakha ubuhlakani bexesha elide kunye nabo bonke abathengisi.
Iimveliso ezilungileyo zivela kwimveliso elungileyo kodwa hayi kuvavanyo. Sinenkqubo yokuvelisa esemgangathweni kunye nemiyalelo eneenkcukacha zomsebenzi kwisikhululo ngasinye sokwenza umsebenzi kumgca wokuvelisa ukuqinisekisa ukuba umgangatho wokusebenza uzalisekiswa ngokuchanekileyo.
Ulawulo loMgangatho wokuGqibela
Sihlola kwaye silawula ngokungqongqo imveliso ephumayo esemgangathweni ngokwemigangatho yamazwe kunye nemigangatho yabathengi, silandele ukusebenza komgangatho weemveliso emva kokuthengisa kwaye sithathe amanyathelo okuphucula ngokukhawuleza nangokufanelekileyo xa kukho nayiphi na ingxelo esemgangathweni engaqhelekanga.